Iyo Apple Watch inoyera kangani kurovera kwemoyo wedu | Ndinobva mac
Iyo Apple Tarisa kubva kune yayo yekutanga modhi ine yakakosha kwazvo yakavakirwa-mukati basa inova iyo kuyerwa kweiyo yedu yemoyo rate. Nedatha iyi iyo mudziyo unowana nekutenda kune iyo sensor iyo inowedzerwa muchikamu chezasi uye mamwe ese ma sensors ayo yaanobatanidza, isu tinopihwa dhata seinonakidza semuenzaniso macalorie atinopisa pazuva, nhanho, pasi akwira kana kungo rova ​​paminiti patinenge tichizorora.
Neiri rese data rakachengetwa, ruzivo rwehutano hwedu runogona kuoneka pane wachi pachayo uye mune Hutano kushandiswa kweiyo iPhone. Asi chaizvo Kakawanda sei Apple Watch yedu ichiyera chiyero chemwoyo? Zvakanaka, ichi chinhu chatichapindura pazasi.
Nguva dzose panguva yekudzidziswa uye zvishoma nezvishoma
Imwe yenzvimbo dzeiri basa ndeyekudzora moyo yedu kuburikidza neyakavakirwa-mukati frequency sensor uye panguva yenguva yekudzidziswa ino sensor inoitwa nguva dzose. Nenzira iyi, zvinotora zviyero zvese zvinodiwa kuti uzive dhata rekori uye vamwe, zvakare kwemamwe maminetsi matatu panguva yekupedzisa kudzidziswa, neizvi zvinokwanisika tora Kudzoreredza data kuti isu tinogona zvakare kuona mune iyo wachi uye kuti rimwe zuva isu tichataura nezve izvo zvavari.
Iyo Apple Watch inoyera chiyero chemoyo wako zuva rese isu patinomiswa uye, nguva nenguva, patinofamba, saka nezviyero izvi kumashure maererano nebasa redu zvinowana data rakakosha kuongorora mamiriro edu ehutano. Iko hakuna nguva yemutengo iyo iyo sensor inogoneswa inogara ichienderana nebasa izvo zvatiri kuita, saka iyo nguva iri pakati pezviyero izvi inosiyana kunze kwekunge tiri kuita kurovedza muviri, saka kana tisina kuita chiitiko ichi chichatibvunza kana tichida kuzviita.
Apple Watch inoverenga zvakare chiyero chekuzorora chezuva nezuva uye avhareji yekufamba - inoenderana kuverenga kwekutora kwemoyo kwakatorwa kumashure ne data accelerometer kana yakwana. kuverenga kwakatorwa kumashure. Kune akatiwandei maapplication ayo anowirirana nekuita kwemuviri uye ayo Apple Watch inogona kushandisa kuchengetedza data, aya anoshandiswa kana mushandisi achiaamisa uye achibvumira iyo data kuti itumidzwe zvakananga muHutano app, senge iyo Nike Run Kirabhu app, pakati pevamwe.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Iyo Apple Watch inoyera kangani kurova kwemoyo wedu?
Apple's (PRODUCT) RED zvigadzirwa zvinopa $ 200 mamirioni
Ikea inotangisa Trådfri smart plugs ayo anoenderana neHomekit mune ramangwana